मध्यवर्तीका बाढीपीडित ः पट्यारलाग्दो राहतको पर्खाइ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
मध्यवर्तीका बाढीपीडित ः पट्यारलाग्दो राहतको पर्खाइ
२०७० फाल्गुन ५, सोमबार १५:१५ गते
बाढी र कटानका कारण कसैको घरजग्गा निकुञ्जको सिमानाभित्र परे क्षतिपूर्ति दिने भन्ने कानुनी व्यवस्थाका आधारमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले राहत रकम दिन सुरू गरेको छ । तर, रकम दिन थालेको दशक बित्न लाग्दा निकुञ्जले कटान भएको मध्ये पाँच प्रतिशत जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन ।
गर्दी गाविस वडा नं. ४ वनकट्टाका सोमल बोटेको १० कट्ठा जग्गा विसं २०३५ सालमा रेवा खोलाले कटान गरेको थियो । निकुञ्जले उनलाई प्रतिकट्ठा ३० हजार रूपैयाँका दरले जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने भयो । तीन वर्षदेखि उनले क्षतिपूर्तिबापतको रकम बुझ्न लागेका हुन्, जुन अझै पूरा भएको छैन ।
‘बजेट कम छ, त्यसैले पाउनु पर्ने रकम किस्ताबन्दी गरेर दिन लागेको हो । तीन वर्ष भयो, अझै पूरा दिन सकिएको छैन’, पाँच पाण्डव मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यमकान्त भूषालले भने । कटानको समस्या भोगेका सबैको अवस्था सोमलको जस्तै हो ।
चितवन निकुञ्जका अधिकारीहरु पनि क्षतिपूर्ति दिनका लागि बजेट थोरै भएका कारणले रकम वितरणमा कठिनाइ भएको स्वीकार गर्छन् । निकुञ्जको आम्दानीबाट मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिलाई आधा बजेट आउने गर्छ । मध्यवर्तीले सोही बजेटबाट कटान भएको जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति दिन्छ ।
निकुञ्जबाट आउने बजेटले मध्यवर्तीले नदी कटानको मात्रै नभएर अरु धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन मध्यवर्तीमा जाने बजेटको १० प्रतिशत छुट्याउने गरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवर बताउँछन् ।
गत वर्ष निकुञ्जको कुल आम्दानी २० करोड रूपैयाँको हाराहारीमा थियो । मध्यवर्तीले त्यसको आधा अर्थात् १० करोड रूपैयाँ पाएको छ । ‘मध्यवर्तीले गर्ने अरु धेरै कामहरु पनि छन् । कटान भएको जग्गाको क्षतिपूर्तिका लागि १० प्रतिशत रकम छुट्याउँदा यो वर्ष एक करोड दिन सकियो’, कुँवरले भने ।
कटान भएको १५ सय बिघा, क्षतिपूर्ति ७३ बिघालाई ः
मध्यवर्ती समितिको नदी कटान क्षतिपूर्ति उपसमितिले ५८ सालमा गरेको स्थलगत अध्ययनले एक हजार ३१० बिघा जग्गा नदी कटानले निकुञ्जको सीमाभित्र परेको ठहर गरेको थियो । त्यसको १० वर्षपछि ६८ सालमा अर्को अध्ययन गर्दा २७४ बिघा थप कटान भएर कटान भएको कुल जग्गा एक हजार ५८४ बिघा कायम भएको छ ।
निकुञ्जले विसं २०६१ सालदेखि नदी कटानमा परेका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन सुरू गरेको हो । अहिलेसम्म जम्मा ७२ बिघा, १२ कट्ठा, आठ धुर जग्गाको मात्रै क्षतिपूर्ति दिएको छ । यत्ति जग्गाको क्षतिपूर्ति दिँदा तीन करोड २४ लाख ३३ हजार ८८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
अहिलेसम्म वितरण भएको रकमलाई आधार मान्दा निकुञ्जले औसतमा एक बिघा जमिनको चार लाख ४४ हजार २९९ रूपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिएको देखिन्छ, जुन ज्यादै न्यूनतम रकम हो । यही न्यूनतम रकमलाई आधार मान्दा पनि बाँकी रहेको जग्गाका लागि ६७ करोडभन्दा धेरै रकम लाग्ने देखिन्छ ।
मालपोत कार्यालयले तय गरेको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन रकममा पा“च हजार रूपैया“ थपेर रकम दिइएको हो । चितवनमा जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य मालपोतले तय गरेको भन्दा कम्तीमा पनि दोब्बर हुन्छ । तर, निकुञ्जले बजेटको समस्याका कारण किनबेचको भन्दा कम मूल्य दिने गरेको छ । पीडितको चित्त बुझाउन मध्यवर्तीलाई गाह्रो भएको छ ।
नारायणी नदीले डेढ बिघा जग्गा कटान गरेको २० वर्षपछि नवलपरासी कुमारवर्ती गाविस वडा नं. ९ अमलटारीका ७० वर्षीय बाबुराम थारुले जम्मा आठ कट्ठा जग्गाको क्षतिपूर्ति बुझेका छन् । त्यो पनि प्रतिकट्ठा २५ हजार रूपैयाँका दरले । सो रकम पुरानो ऋण तिर्न र रासन किन्नमै ठिक्क भयो भन्छन् उनी ।
विसं २०४६ सालमा कटान भएको १० कट्ठा जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउन दिव्यनगरकी खगी सापकोटाले २० वर्षभन्दा धेरै समय कुर्नुप¥यो । उनले विसं २०६९ को साउनमा प्रतिकट्ठा ३० हजार रूपैयाँका दरले रकम पाइन् । त्यो पनि कटान भएको पूरै जग्गाको नभएर आधा अर्थात् पाँच कट्ठा जग्गाको मात्रै क्षतिपूर्ति पाइन् ।
मध्यवर्तीका स्थानीय उपभोक्ता समितिले क्षतिपूर्ति रकम सिफारिस गर्छन् । ‘हामीले यसरी रकम दिँदा घरबार नै कटानमा परेकालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । धेरै जग्गा कटानमा परे पनि उनीहरुलाई एकैपटक रकम दिन सकिँदैन, त्यसैले कटान धेरै भए पनि पहिलो चरणमा थोरै जमिनको क्षतिपूर्ति दिने गरेका हौँ’, निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरले भने ।
५०औँ वर्ष लाग्ने सम्भावना ः
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले क्षतिपूर्तिका लागि मध्यवर्तीकै बजेटमा निर्भर रहनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मध्यवर्तीले यो मात्र होइन, सामुदायिक विकास, संरक्षण शिक्षा र वन्यजन्तुले गर्ने नोक्सानको क्षतिपूर्ति दिने काम पनि यही बजेटबाट गर्नुपर्छ ।
मध्यवर्तीले १० करोड रूपैयाँ पाउन लागेको यो वर्षदेखि नै हो । अघिल्ला वर्षहरुमा निकुञ्जकै कुल आम्दानी १० करोड रूपैयाँभन्दा कम हुने गर्दथ्यो । मध्यवर्तीले कटानको जग्गालाई क्षतिपूर्ति दिन यो वर्ष एक करोड रकम छुट्याए जसरी सधैँ छुट्याउन सके पनि पूरैलाई रकम दिन ६७ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
‘कि निकुञ्जको बजेट पूरै यहीँ राख्नुप¥यो, यसो गर्दा पनि केही वर्ष लाग्ला; नत्र मध्यवर्तीमा जाने बजेट पनि पूरै जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनमा खर्च गर्न सकिँदैन । अरु काम पनि गर्ने, जग्गाको क्षतिपूर्ति पनि दिने हो भने सबैले रकम पाउन दशकौँ लाग्ने देखिन्छ’, मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिका संस्थापक अध्यक्ष केशव देवकोटाले भने ।
संरक्षणका दृष्टिले कटान भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा अन्य गतिविधिहरु प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । दुर्लभ वन्यजन्तु बाघ, गैँडाको वासस्थल रहेको चितवन निकुञ्जमा संरक्षण शिक्षा मुख्य कुरो हो, जुन कामका लागि मध्यवर्तीले धेरै बजेट सक्ने गरेको छ ।
‘सबैलाई एकैचोटि र चाँडो क्षतिपूर्ति बाँड्ने हो भने मध्यवर्तीमा आउने मात्रै नभएर सरकारले पनि विशेष बजेट दिनुपर्छ’, मध्यवर्तीका संस्थापक अध्यक्ष देवकोटाको सुझाव छ । निकुञ्ज ३० सालमा बने पनि ५२ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्था भएपछि बल्ल क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी प्रवधान बनेकोे हो । तर, त्यसको १० वर्षपछि मात्र पीडितहरुले रकम बुझ्न सुरू गरेका हुन् ।
चितवन निकुञ्जको सिमाना भएर बग्ने नारायणी नदी र राप्ती तथा रेवा खोलाको कटानले स्थानीयको जग्गा निकुञ्जको सिमानामा पर्ने गरेको छ । चितवनको पटिहानी, जगतपुर, शुक्रनगर, मेघौली, दिव्यनगर, गुञ्जनगर, बछौली, कठार, गर्दी, बघौडा नथा नवलपरासीको नयाँबेल्हानी, पर्सौनी, कोल्हुवा, अग्यौली, सिसावार र अमरापुरी गाविसको जग्गा नदी कटानले निकुञ्जको सीमाभित्र गएको छ ।